Gloria Fuertes: tononkalo | Literatiora Vaovao
Encarni Arcoya | 30/12/2021 09:12 | Nohavaozina amin'ny 30/12/2021 09:14 | tononkalo
Loharano sary Gloria Fuertes: Tononkalo - Facebook Gloria Fuertes
Tsy misy isalasalana fa Gloria Fuertes dia iray amin'ireo mpanoratra malaza indrindra eran-tany. Saika tsaroana foana ny tononkalony satria niara-nihalehibe taminy izahay. Saingy ny marina dia izy dia mihoatra noho ny poeta ho an'ny ankizy. Na ny tarehimarika Gloria matanjaka sy ny tononkalony dia samy maharitra amin'ny fotoana.
fa, Iza moa i Gloria Fuertes? Inona no tononkalo manan-danja indrindra nosoratanao? Nanao ahoana izy tao?
1 Iza moa i Gloria Fuertes
2 Ny tononkalo tsara indrindra an'i Gloria Fuertes
2.1 Rehefa nomena anarana ianao
2.2 Hitanao izay tsy misy dikany
2.4 Ny akoholahy mifoha
2.5 Ao amin'ny zaridainako
2.6 Eritrereto, eritrereto ...
2.8 Ho aiza ianao ry mpandrafitra? (CAROL)
2.9 Eo amin'ny sisiny
2.11 Ny rameva kely
2.12 Amin'ny tarehiko boribory
2.13 Ry ampondra mahantra!
Iza moa i Gloria Fuertes
Araka ny tenin'i Camilo José Cela, Gloria Fuertes dia 'anjely bitchy' (azafady). Tsy nanana fiainana mora izy, ary na dia izany aza dia nahavita nanoratra tononkalo tsara indrindra ho an'ny ankizy izy.
voninahitra mahery dia teraka tao Madrid tamin'ny 1917. Nihalehibe tao amin'ny manodidina an'i Lavapiés izy, tao an-tratran'ny fianakaviana manetry tena (mpanjaitra reny sy mpiandry varavarana ny rainy). Teo anelanelan'ny sekoly isan-karazany ny fahazazany, izay notantarainy tamin'ny tononkalony ny sasany.
Teo amin'ny faha-14 taonany, nampiditra azy tao amin'ny Ivon-toeran'ny Fampianarana matihanina ho an'ny vehivavy ny reniny, izay nahazoany diplaoma roa: Shorthand sy Typing; ary ny momba ny fahadiovana sy ny fikarakarana zaza. Tsy nandeha niasa anefa izy, fa nanapa-kevitra ny hisoratra anarana amin’ny fitsipi-pitenenana sy ny haisoratra.
Ny tanjonao, ary izay tiany hatrizay, dia mpanoratra izy. Ary nahomby izy tamin'ny 1932, teo amin'ny faha-14 taonany, rehefa namoaka ny iray amin'ireo tononkalony voalohany izy ireo, "Ny fahazazana, ny fahatanorana, ny fahanterana ...".
Mpitantana kaonty tao amina orinasa iray no asany voalohany, izay nanome azy fotoana hanoratra tononkalo. Tamin'ny 1935 izy no namoaka ny fitambaran'izy ireo, Nosy tsy noraharahiana, ary nanomboka nanome tononkalo tao amin'ny Radio Madrid. Tsy niala tamin’ny asany anefa izy. Nanomboka tamin'ny 1938 ka hatramin'ny 1958 dia niasa tamin'ny naha-sekretera izy mandra-pahafatiny niala. Ary ho fanampin'io asa io dia nanana tonian-dahatsoratra hafa tao amin'ny gazetiboky ho an'ny ankizy ihany koa izy. Io karazana io no nahavita nanokatra ny varavaran'ny laza, izay tonga taminy tamin'ny 1970 rehefa Ny Televiziona Espaniola dia nanasongadina azy tamin'ny fandaharana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary nampahafantatra eran-tany ny tononkalony.
Farany, ary noho izy io dia iray amin'ireo tononkalo miresaka momba ny fiainany, dia avelanay aminao ny fomba nanehoany ny tenany.
Gloria Fuertes dia teraka tany Madrid
amin'ny taona roa,
Eny ary, ny fiterahana ny reniko dia tena niasa mafy
fa raha atao tsinontsinona izy dia maty ho velona ho ahy.
Efa nahay namaky teny izy tamin’izy telo taona
Efa fantatro ny asako tamin'ny enina.
Tsara sy mahia aho
ambony ary somary marary.
Tratran’ny fiara aho tamin’izaho sivy taona
Tamin'ny efatra ambin'ny folo dia nahatratra ahy ny ady;
Tamin’ny dimy ambin’ny folo taona no maty ny reniko, niala tamin’ny fotoana nilako azy indrindra izy.
Nianatra nivarotra tany amin'ny fivarotana aho
ary hankany an-tanàna haka karaoty.
Nanomboka tamin'ny fitiavana aho,
-Tsy milaza anarana aho-,
noho izany dia afaka niaritra aho
tanora manodidina ahy.
Te handeha hiady aho, hampitsahatra izany,
Nosakanan’izy ireo teny an-dalana anefa aho
Avy eo nisy birao nivoaka ho ahy,
izay iasako toa adala,
(Fa Andriamanitra sy ilay bellhop dia mahafantatra fa tsy izaho)
Manoratra aho amin'ny alina
ary mandeha any an-tsaha aho.
Ny ahy rehetra dia efa maty nandritra ny taona maro
ary izaho irery kokoa noho izaho.
Nandefa andininy tamin'ny kalandrie rehetra aho,
Manoratra amin'ny gazety ho an'ny ankizy aho,
ary te-hividy voninkazo voajanahary tsikelikely aho
tahaka ireo omeny an'i Pemán indraindray.
Ny tononkalo tsara indrindra an'i Gloria Fuertes
Loharano: Facebook Gloria Fuertes
Etsy ambany no nanangonanay ny sasany amin'ireo tononkalon'i Gloria Fuertes ka raha tsy fantatrao dia ho hitanao ny fomba nanoratany. Ary, raha fantatrao izy ireo, dia azo antoka fa te hamaky azy ireo indray ianao satria iray amin'ireo tononkalo tsara indrindra izy ireo.
Rehefa nomena anarana ianao
Rehefa nomena anarana ianao,
nangalatra kely ny anaranao amiko izy;
toa lainga izany,
izay litera antsasa-polo dia milaza betsaka.
Ny hadalako dia ny hamongotra ny rindrina amin'ny anaranao,
Handoko ny rindrina rehetra aho,
tsy hisy fantsakana
raha tsy asehoko
hilaza ny anaranao,
na tendrombohitra vato
izay tsy hivazavazako
fampianarana ny ako
ireo litera eninao samy hafa.
Ny hadalako dia ho,
ampianaro ny vorona hihira izany,
ampianaro ny trondro hisotro azy,
ampianaro ny olona fa tsy misy na inona na inona,
toy ny lasa adala sy mamerina ny anaranao.
Ny hadalako dia ny hanadino ny zava-drehetra,
amin'ireo litera 22 sisa, amin'ny isa,
amin’ireo boky novakiana, amin’ireo andininy noforonina. Miarahaba amin'ny anaranao.
Mangataha mofo misy ny anaranao.
- Mitovy foana no lazainy - hoy izy ireo amin'ny diako, ary izaho, tena mirehareha, faly, falifaly.
Ary handeha ho any amin'ny tontolo hafa aho amin'ny anaranao eo am-bavako,
amin'ny fanontaniana rehetra dia hovaliako ny anaranao
- tsy hahazo na inona na inona ny mpitsara sy ny olo-masina-
Andriamanitra dia hanameloka ahy ny hiteny izany tsy an-kijanona mandrakizay.
Hitanao izay tsy misy dikany
Hitanao izay tsy misy dikany,
Tiako ny manoratra ny anaranao
fenoy taratasy ny anaranao,
fenoy ny anaranao ny rivotra;
lazao amin'ny ankizy ny anaranao,
manorata amin’ny raiko efa maty
ary lazao aminy fa toy izany ny anaranao.
Mino aho fa isaky ny miteny izany aho dia mihaino ahy ianareo.
Heveriko fa vintana tsara izany.
Mandalo eny an-dalambe aho dia faly
ary tsy mitondra afa-tsy ny anaranao aho.
Mbola kely aho no teraka.
Nitsahatra tsy nahay namaky teny intsony aho tamin’izaho telo taona,
virjiny, valo ambin'ny folo taona,
maritiora, amin’ny dimampolo.
Nianatra nitaingina bisikileta aho,
rehefa tsy tonga tamiko izy ireo
tongotra amin'ny pedal,
hanoroka, raha tsy nahatratra ahy
nono amin'ny vava.
Vetivety dia tonga matotra aho.
voalohany tao amin'ny Urbanity,
Tantara Masina sy Fanambarana.]
Na Algebra na Rahavavy Maripili dia tsy nety tamiko.
Teraka tsy nisy peseta aho. izao,
taorian'ny dimampolo taona niasana,
Manana roa aho.
Ny akoholahy mifoha
hoy ny akoholahy
ary io no akanjony
ny volom-borona tsara tarehy.
mitsangàna ry tantsaha,
fa efa eo ny masoandro
ho avy ny andro.
Zanaky ny tanàna
mifohaza miaraka amin'ny ole,
miandry anao ao amin'ny "sekoly".
Tsy mila famantaranandro ny tanàna
mendrika ny fanairana ny akoholahy.
Ao amin'ny zaridainako
Eo amin'ny ahitra no miteny amiko ny hazo;
ny tononkalon'Andriamanitra fahanginana.
Manaitra ahy tsy misy tsiky ny alina,
manetsika ao am-poko ny fahatsiarovana.
miandry! aza mandeha!
An'iza io? Iza no niteny an'izany?
Oroka izay nandrasako dia nandao ahy ianao
Eo amin'ny elatry ny voloko volamena
Aza mandeha! Ampamirapirato ny voninkazoko!
Ary fantatro ianao, ry iraky ny rivotra;
valio izy hoe: Hitanao aho,
miaraka amin'ny boky mahazatra eo anelanelan'ny rantsan-tànanao.
Rehefa miala ianao, manazava ny kintana,
noraisiny ny mazava, ka zara raha mahita aho,
ary fantatro, ry rivotra, ory ny fanahiko;
ary ento any aminy amin'ny sidina haingana io "daty" io.
... Ary misafosafo ahy ny rivotra,
ary tsy miraharaha ny faniriako ...
Loharano: Gloria Fuertes Facebook
Eritrereto, eritrereto ...
mitaingina boriky izy
fohy izy, matavy ary kibo;
ampinga sy lefona,
mahay teny, marani-tsaina.
Iza moa izy? (Sancho Panza)
Ety an-tany Ianao, ry Rainay,
Ny tsapako anao eo amin'ny tendron'ny kesika,
Ao amin'ny vatana manga ny mpiasa,
Ao amin`ny ankizivavy izay manao amboradara curved
Ny lamosina, mampifangaro ny kofehy amin'ny rantsantanana.
Rainay izay eto an-tany,
Ao amin'ny groove
Ao amin'ny toeram-pitrandrahana,
Ao amin'ny seranana,
Ao amin'ny sinema,
Ao amin'ny divay
Ao amin'ny tranon'ny dokotera.
Aiza no misy ny voninahitrao sy ny helonao
Ary ny limbonao; hoe any amin'ny cafe ianao
Aiza no hisotroan'ny mpanankarena ny sodany.
Eo amin'ny dabilio amin'ny famakiana Prado.
Ianao ilay antitra manome mofo ho an'ny vorona eny an-dalana.
Ao amin'ny cicada, amin'ny oroka,
Amin'ny spike, amin'ny tratra
Amin'ireo izay tsara rehetra.
Dada mipetraka na aiza na aiza,
Andriamanitra izay miditra na aiza na aiza,
Ianao izay manaisotra ny fahoriana, izay etỳ an-tany,
Rainay mahita Anao
Ireo izay tsy maintsy ho hitantsika any aoriana,
Na aiza na aiza, na any an-danitra.
Ho aiza ianao ry mpandrafitra? (CAROL)
-Ho aiza ianao mpandrafitra
miaraka amin'ny lanezy?
-Mandeha any an-tendrombohitra aho haka kitay
ho an'ny latabatra roa.
miaraka amin'ity fanala?
- Mandeha any an-tendrombohitra aho haka kitay,
miandry ny Raiko.
-Ho aiza ianao miaraka amin'ny fitiavanao
Zanaky ny maraina?
-Hovonjeko ny olona rehetra
izay tsy tia ahy.
vao maraina be?
- Handeha hiady aho
Eo amin'ny sisiny
Milanja efapolo kilao aho.
Efa teo amoron’ny tioberkilaozy aho
eo an-tsisin’ny fonja,
teo amoron'ny fisakaizana,
amin'ny sisin'ny zavakanto,
eo an-tampon’ny famonoan-tena,
eo amoron’ny famindram-po,
eo amoron’ny fitsiriritana,
eo amoron’ny laza,
amin'ny sisin'ny fitiavana,
ary, tsikelikely, dia nampatory ahy izany,
ary indro aho matory eo amin'ny sisiny,
Ny tantely tsirairay miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy.
Ny gana tsirairay dia manana ny tongony.
Ho an'ny foto-keviny avy.
Ny boky tsirairay miaraka amin'ny fonony.
Samy manana ny karazany avy ny lehilahy.
Samy misioka amin'ny sodinany avy.
Samy mifantoka amin'ny tombo-kaseny.
Ny vilia tsirairay miaraka amin'ny kapoakany.
Ny renirano tsirairay miaraka amin'ny vavany.
Saka tsirairay miaraka amin'ny sakany.
Ny orana tsirairay miaraka amin'ny rahona.
Ny rahona tsirairay miaraka amin'ny ranony.
Ny ankizilahy tsirairay miaraka amin'ny zanany vavy.
Ny mananasy tsirairay miaraka amin'ny mananasy.
Isaky ny alina miaraka amin'ny maraina.
Ny rameva kely
Voatsindrona ny rameva
miaraka amin'ny tsilo lalana
ary ny mekanika Melchor
nanome azy divay.
nandeha nametaka lasantsy
ankoatry ny kesika fahadimy ...
ary sahiran-tsaina ilay Melkiora lehibe
nijery ny "Longinus" azy izy.
-Tsy tonga izahay,
tsy tonga izahay,
ary tonga ny Fahaterahana Masina!
- amin'ny roa ambin'ny folo ora telo minitra izao
ary mpanjaka telo no very.
Ny rameva mikisaka
ny antsasaky ny maty noho ny velona
teo amin’ny vatan-kazo oliva.
Manatona an'i Gaspar,
Nibitsibitsika teo an-tsofiny i Melchior hoe:
- Birria rameva tsara
fa tany atsinanana no namidiny anao.
Teo amin’ny fidirana ho any Betlehema
nikiakiaka ny rameva.
Endrey ny alahelo lehibe
amin'ny befony sy amin'ny karazana azy!
Nilatsaka ny miora
Baltasar mitondra ny tratra,
Melchior dia nanosika ilay bibikely.
Ary efa mangiran-dratsy
- efa nihira ny vorona-
dia nijanona ny mpanjaka telo
miloa-bava sy tsy manapa-kevitra,
mandre resaka toy ny lehilahy
amin’ny zaza vao teraka.
-Tsy mila volamena na emboka manitra aho
na ireo harena mangatsiaka be ireo,
Tiako ny rameva, tiako izy.
Tiako izy, - hoy indray ilay Zaza.
Nandeha an-tongotra niverina ireo mpanjaka telo
sosotra sy ory.
Raha mbola nandry ny rameva
mikitikitika ny zaza.
Amin'ny tarehiko boribory
Manana maso sy orona aho
ary vava kely koa
miresaka sy mihomehy.
Ny masoko no ahitako ny zava-drehetra
amin'ny orona no mahatonga ahy mangidy,
amin'ny vavako toy ny ahoana
Ry ampondra mahantra!
Tsy hitsahatra ho ampondra mihitsy ny boriky.
Satria tsy mandeha any an-tsekoly ny ampondra.
Tsy ho soavaly mihitsy ny boriky.
Tsy handresy hazakazaka mihitsy ny ampondra.
Inona no fahadisoan'ny boriky amin'ny maha-ampondra azy?
Ao amin'ny tanànan'ny boriky tsy misy sekoly.
Ny boriky mandany ny androny amin'ny asa,
tsy misy fanaintainana na voninahitra,
Ary ny faran'ny herinandro
mifamatotra amin'ny kodiarana ferris.
Tsy mahay mamaky teny ny boriky,
fa misy fitadidiana.
Tonga amin'ny tsipika fahatongavana farany ny ampondra,
Fa ny poeta mihira ho azy!
Matory ao anaty trano bongo ny ampondra.
Aza atao hoe boriky ny boriky,
antsoy izy hoe "mpanampy olona"
na miantso azy hoe olona
Mahafantatra tononkalo mendrika hotsaroana avy amin'i Gloria Fuertes ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » entana » tononkalo » Gloria Fuertes: tononkalo
Christina Rossetti. Tsingerintaona nahafatesany. tononkalo